Nnwale glucose, Nebulizer Wearable, Smart Glucose Meter - e -Linkcare
e-LinkCare, Ijikọ nlekọta maka ndụ ka mma
e-LinkCare Meditech Co., Ltd. guzobere site na otu ndị ọkachamara ahụike na ndị prọfesọ, gbado anya na njikwa ọrịa na-adịghị ala ala, ọkachasị Asthma, COPD na ọrịa metabolic dabere na teknụzụ dị oke ọnụ na ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe ụlọ ọgwụ. ngwaahịa ọhụrụ, ọrụ oge iji mezuo ihe ndị ahịa anyị chọrọ n'ụwa niile chọrọ.
mara ihe banyere ụlọ ọrụ
ACCUGENCE ® Usoro nlekota ọtụtụ (PM 900)
ACCUGENCE ® Sistemụ nleba anya ọtụtụ PRO (PM 950)
ACCUGENCE ® Sistemụ nleba anya LITE (PM 910)
MGBE ® Sistemụ Spirometer nke Ọtụtụ Ọrụ (PF810)
MGBE ® Sistemụ spirometer (PF680)
MGBE ® Usoro spirometer (PF280)
MGBE ® Onye nyocha mkpachapụ (BA200)
MGBE ® Nebulizer ntupu wearable (NS180, NS280)
ACCUGENCE ® Mpempe Nnwale Glucose Ọbara (Glucose Oxidase)
ACCUGENCE ® Mpempe Nnwale Glucose Ọbara (GADU glucose Dehydrogenase FAD-dabere)
ACCUGENCE ® Nnwale ule ketone ọbara
ACCUGENCE ® Mpempe ule Hemoglobin (SM511)
anyị ndụmọdụ ime
ACCUGENCE ® Usoro
MGBE ® Usoro
ACCUGENCE ® Sistemụ nleba anya ọtụtụ (PM900)
ACCUGENCE ® Sistemụ nleba anya ọtụtụ (PM950)
ACCUGENCE ® PMB 910
ACCUGENCE ® Mpempe ule Hemoglobin (HB)
ACCUGENCE ® Mpempe Nnwale Glucose Ọbara (GDH-FAD)
ACCUGENCE ® Mpempe Nnwale Glucose Ọbara (CHINEKE)
MGBE ® Sistemụ Pro Spirometer (PF680)
MGBE ® Ihe Nebulizer Mesh
MGBE ® Sistemụ Nnwale Nnwale Pulmonary
MGBE ® Onye nyocha iku ume (BA810)
anyị ga -ahụ na ị na -enweta ya mgbe niile
Ebupụ ya n'ihe karịrị mba 70 ma na -eto
Akwadoro karịa ụlọ ọgwụ 5000+ n'ụwa niile na ngwaahịa na ọrụ anyị
Afọ nke ahụmịhe
Onye nrụpụta ọkachamara na ụlọ ọrụ ngwaọrụ ahụike
Ndị ọrụ ọkachamara
Ihe karịrị 60% bụ ọrụ nyocha & mmepe
Site na ntinye akwụkwọ ikike 22+
Onye na-enye nlekọta ahụike dị elu maka ịdị mma ndụ
e-LinkCare nwere ndị ọrụ raara onwe ha nye na ahụmịhe iji rụpụta R&D, Ahịa na Ahịa, ọ bụ otu nwere nnukwu agụụ idobe ọkwa ọhụrụ, ihe ọmụma, nka nka, ọrụ iji nyefee azịza agbakwunyere. Ebumnuche anyị iwulite mmekorita siri ike na ndị ahịa anyị na uru nkwanye ugwu na ntụkwasị obi.
e-LinkCare raara onwe ya nye inye azịza zuru oke maka ndị na-ahụ maka ụlọ ọgwụ na nlekọta ụlọ ọgwụ na ọrịa iku ume, ọrịa obi na ọrịa metabolism. Ruo ugbu a, usoro ngwaahịa dị njikere ịmalite: 1. Portable na Desktop Spirometer 2. Sistemụ Ozi iku ume 3. Wearable Mesh Nebulizer 4. Sistemụ nleba anya ọtụtụ na eriri ule.
ọhụụ anyị bụ ka ọ bụrụ onye na -eweta ụwa zuru oke na ọgwụgwọ ọrịa na -adịghị ala ala maka ngalaba ọkachamara na nlekọta ụlọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ohere maka imekọ ihe ọnụ ma ọ bụ ụdị ajụjụ ọ bụla, nzaghachi, anyị ga -achọ ịnụ n'ọnụ gị.
nyefere ugbu a
ọhụrụ akụkọ & blọọgụ
site na nchịkwaMachị-23-2021
e-LinkCare gara 2017 ERS international Cong ...
e-LinkCare gara nzukọ ọgbakọ mba ụwa nke 2017 ERS na Milan ERS makwaara dị ka European Respiratory Society mere ọgbakọ mba ụwa nke 2017 na Milan, Italy na Septemba a. A na -akpọ ERS ...
site na nchịkwaỌkt-18-2018
e-LinkCare gara nzukọ ọgbakọ mba ụwa nke ERS ...
2018 European Respiratory Society International Congress mere na 15 ruo 19 Septemba 2018, Paris, France nke bụ ihe ngosi kacha emetụta ụlọ ọrụ iku ume; bụ ebe nzukọ maka ndị ọbịa na akụkụ ...
e-LinkCare sonyere na 54th EASD na Berlin
e-LinkCare Meditech Co., LTD gara 54th EASD Nzukọ Kwa Afọ a na-eme na Berlin, Germany na 1st-4th October 2018. Nnọkọ sayensị, nke bụ nnukwu ọgbakọ ọrịa shuga kwa afọ na Europe, wetara ihe karịrị mmadụ 20,000 site na ahụike, a ...
Ijikọ nlekọta maka ndụ ka mma.
Ngalaba 46 Cariocca Business Park 2 Sawley Road, Miles Platting, Manchester United Kingdom M40 8BB
Igwe Nnwale Ọbara Ọbara, 5.2 Ọbara shuga, Companylọ ọrụ kacha mma na -enyocha shuga, Ngwa Nnwale Nnwale Ọbara Ọbara, Ọbara ọbara na -ebu ọnụ 100, Spirometer nke pneumotachograph,